जनता समृद्ध बनाउन नदिने कोरोनाविरुद्ध लड्छौं » छलफल
जनता समृद्ध बनाउन नदिने कोरोनाविरुद्ध लड्छौं
– उद्धव खरेल, नगरप्रमुख, बूढानीलकण्ठ नगरपालिका, काठमाडौंं
यो महामारीमा कसरी काम गरिरहनुभएको छ ?
स्वास्थ्य मन्त्रालयको मापदण्ड र सीसीएमसीको निर्देशिकाअनुसार माक्स लगाउने, सामाजिक दूरी कामय गर्ने, साबुन पानी वा सेनिटाइजरले बरोबर हात सफा गर्ने, भीडभाड कम गर्नेलगायत सुरक्षाका सबै उपाय अवलम्बन गरेर सबै कर्मचारी र जनप्रतिनिधि दैनिक खटेर काम गरिरहेका छौ ।
कस्ता कस्ता काम गरिरहनुभएको छ त ?
कोभिड १९ रोग यस्तो हो, यसरी लाग्छ, यसबाट बच्न यसरी सुरक्षित रूपमा बस्नुपर्छ, सरकारको अभियानलाई सहयोग गर्नुपछ भनेर सिकाउनेदेखि सञ्चारमाध्यमबाट प्रचारप्रसार गर्ने, जनसचेतनता फैलाउनेलगायतका काम ग¥यौं । लकडाउनको बेला समस्यामा परेका गरिब नगरवासी जनतालाई राहत बाँड्ने, क्वारेन्टाइन बनाउने, संक्रमितलाई राख्ने, आइसोलेसनमा राखेर उपचार गर्नेदेखि सुरक्षित बस्ने सन्दर्भमा गर्नु पर्ने सबै काम व्यापक रूपमा ग¥यौं । सुरुमा यस नगरपालिकामा १० जना संक्रमित थिए, तर साउनदेखि बढ्दै गएर अहिलेसम्म आइपुग्दा ३ सय ५० जना जति संक्रमित भएको देखिएको छ । अहिले १ सय ३० जना जति बिरामी छन् । त्यसमध्ये ३० जना जति सक्रिय संक्रमित छन भने बाँकी १ सय होम आइसोलेसनमा रहेका छन् । हामीले गरिब जनतालाई खाना खुवाउनेदेखि रोजगारी दिनेसम्मका काम गरेका छौं । अहिले पनि नगरवासीलाई केही समस्या भएको अवस्थामा सहयोग गर्ने, काउन्सिलिङ गर्ने सहयोग गर्नेदेखि कन्ट्याक टे«सिङलाई बढाएका छौं । जति धेरै कन्ट्याक टे«सिङ परीक्षण बढायो त्यति धेरै संक्रमित देखिँदा रहेछन् । संक्रमण देखिसकेपछि बलियालाई पनि जबर्जस्ती क्वारेनटाइनमा पठाइहाल्नु पर्ने नियम हुँदोरहेछ । यस्तो अवस्थाले त राज्यले धान्न सक्लाजस्तो मैले देखेको छुइन् । त्यसैले यो मानसिकता परिवर्तन गरेर गम्भीर समस्या भएकालाई अस्पताल राखेर उपचार गर्ने, सामान्य अवस्थामा रहेका र अन्य मानिसले यसलाई छल्दै काम गर्नु पर्छ ।
विकास निर्माणका काम कत्तिको भएका छन् ?
जुनबेला हामीले विकास निर्माणका काम गर्नुपर्ने थियो, त्यही बेलादेखि बन्दाबन्दी भएकाले पूर्वाधार निर्माणका कामहरू हुन सकेका छैनन् । हामीले अहिले झण्डैझण्डै १ अर्ब २३ करोड बराबरको विकास निर्माणका कामहरू गर्नु पर्ने छ । ती कतिपय कामहरू ठेक्का लागिसकेका छन् भने कतिपय लाग्न बाँकी छन् ।
जनताको माग के छ ?
जनताले बाटो, बिजुली, खानेपानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारीलगायत छिटो छरितो प्रशासनिक सेवाको माग गर्छन् ।
के कस्ता कुरालाई बढ प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहनुभएको छ त ?
नगरपालिको चुनाव भएको ३ वर्ष भयो । निर्वाचनमा हामी जनताकोमा जाँदा हात उठाएर पाँचवटा औला देखाएर ५ वर्षमा हामी ५ वटा काम गर्ने छांै भनेका थियौं । ती ५ काममा पहिलो सुशासन, दोश्रो भौतिक पूर्वाधारका विकास, तेश्रो सामाजिक विकास, चौथो आर्थिक विकास र पाँचौ वन, वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापनका काम । अहिले हाम्रो सारा ध्यान त्यसैमा छ, त्यहीसँग सम्बन्धित विकासका काम हामीहरू युद्धस्तरमा गरिरहेका छांै । तर, अब मानिसहरूका त असीमित इच्छा र माग हुन्छन्m कसैलाई बाटो, कसैलाई पानी, कसैलाई ढल, कसैलाई स्वास्थ्य उपचार, कसैलाई शिक्षा, कसैलाई रोजगारी, कसैलाई कर छुट, कसैलाई सुन्दर पार्क निर्माण, कसैलाई खेल मैदान निर्माण, कसैलाई भौतिक पूर्वाधार विकास निर्माण, कसैलाई वातावरणको स्वच्छता, कसैलाई फोहोरमैला नियन्त्रण आदि इत्यादि थरीथरीका मानिसको थरीथरीका माग छन् । ती थरीथरीका आकांक्षा भएका नगरवासीले भोट हालेर जितेका हामी जनप्रतिनिधि भएकाले हामीले सबैको इच्छा, आकांक्षा, चाहना र आवश्यकतालाई समेटेर सन्तुलनमा राखेर काम गर्नु पर्छ, जनताकै हितमा काम गर्नु पर्छ भनेर जनताले उठाएका मागहरू बाटोघाटो, सडक निर्माण विस्तार, त्यसको स्तरीकरण, भौतिक पूर्वाधार निर्माण, स्वच्छ हराभरा नगरपालिका बनाउने, रोग भोकले समस्या नभएको नगर बनाउने, जनता सुखी भएको नगर बनाउने, अस्पताल, स्वास्थ्य चौकी बनाउने आदि इत्यादि कामलाई अभियानकै रूपमा अगाडि बढाउने काम गरिरहेका छौं ।
योजना र सोचअनुसार काम भएका छन् कि छैनन् त ?
हामीलाई निर्धारित लक्ष्यमा पुग्न र हाम्रो लक्ष्यअनुसार काम गर्न गाह्रै भएको छ । जुनबेला हामीले हाम्रो लक्ष्यअनुसार विकास निर्माणका काम गर्नु पर्ने थियो, त्यही बेलादेखि बन्दाबन्दी भयो, राम्ररी काम गर्न नपाएको ७ ,८ महिना भइसक्यो, हाम्रो कर्मचारी संयन्त्र पनि यही हो, बानी नपरेको, संघीयताका कारण भर्खर भर्खर काम सिक्दै गरेको, नयाँ नयाँ ठाउँबाट आएको, सबै कुरा बुझिनसकेको, अलि ढिलो ढिलै छ । थिति नबसिसकेको, कर्मचारी पनि परिवर्तन भएको भइरहने हुनाले सोचे जति हुन गर्न सकेको छैन । हामी पनि सिक्दैछांै, गर्दैछौं, समय लाग्छ, हुन्छ, हुँदै पनि छ । अझै पनि दुई वर्ष बाँकी नै छ । सबै कुराको जग बसिसकेको छ, अब काम हुन्छ । हामी इच्छाशक्तिका साथ गर्नु पर्छ भनेर लागेका छांै, गर्छौंं ।
बजेटमा के–के कुरालाई बढी प्राथमिकतामा राखेर काम गर्दै हुनुहुन्छ ?
हामीले गत वर्षलाई भौतिक विकास निर्माणको वर्ष भनेर घोषणा पनि, सुरुवात पनि ग¥यौं, त्यसका लागि टेण्डर गर्न पनि तयारी ग¥यौं । प्राविधिकको समस्या रहेको थियो, त्यसलाई पनि जिनोतिनो समाधान गरेर काम गर्न थाल्न खोजेका थियांै कोरोना आएर सबै ठप्प पारिदियो । यसमा त कस्तो हुँदो रहेछ भने महामारी आयो काम नगर, तलब दिन्छौ, जाऊ सबै घर बस, घर बसेर खाऊ, काम गर्न आउनु प¥यो भने हामीले बोलाउन प¥यो भने भत्ता दिन्छौ भनेर भन्नु पर्ने अवस्था आयो । त्यतिमात्र होइन, नगरपालिकामा कहाँ कोरोना छ भनेर खोज्दै हिँड्ने, कुनै ठाउँमा एउटा देखियो भने सिंगो नगरपालिकाका प्रत्येक व्यक्तिमा कोरोना खोज्दै हिँड्नु पर्ने, सारा खर्च गरेर भए नभएकालाई पीसीआर परीक्षण गर्नु पर्ने, उपचार गर्नु पर्नेदेखि कोही खानले नमरून् भनेर ५ करोडको त राहत नै बाँड्नु पर्ने अवस्थाको श्रृजना भयो । त्यति गरेर जनतालाई सेवा गर्दा पनि कतिपय सन्तुष्ट हुन सकेनन्, मलाई भएन, पुगेन, नगरपालिकाले गर्दै गरेन् भन्नेसम्मका गुनासाहरूका बीच काम गनु पर्ने अवस्था छ । तथापि, हामीले यी सबैलाई ध्यानमा राखेर जनताको हितकै खातिर यस वर्ष निकै काम गर्ने गरी अघिल्लो वर्षको बाँकी रहेको बजेटलाई समेत थपेर अलिक ठूलै भोलुमको बजेट ल्याएका छौं । विकास निर्माणको राम्रो योजनासहित लक्ष्य भेदन गर्ने गरी झण्डै दुई अरब बराबरको बजेट ल्याएका छौं । यो सबै काम यो वर्ष गर्ने भनेर ल्याएका थियौं तर अहिले बजेट ल्याएको पनि तीन महिना बितिसक्यो काम गर्न पाएका छैनौं । अब परिस्थिति संलियो, कोभिडको अन्त्य भयो भने हामीले लक्ष्य भेदन गर्न सक्छौं, हामीले बनाएको योजना र बजेट कार्यान्वयन गर्न सक्छौं । यदि त्यसो भएन, परिस्थिति झन् गम्भीर बन्दै गयो, झन्पछि झन् समस्या थपिँदै गयो फेरि पनि निषेधाज्ञा जारी गर्नु पर्ने अस्था आयो भने हामीलाई जति गाली गरे पनि काम हुन सक्दैन, जनचाहाना पूरा गर्न सकिँदैन, लक्ष्य भेदन गर्न सकिँदैन । हामीले विशेष गरेर कृषि र पर्यटनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेका छौं । जहाँसम्म नगरपालिकाको कार्यालयको कुरा उठाउनुभयो, पहिले हामीलाई भाडामा बस्दा काम गर्न असहज थियो, साँगुरो थियो, काम गर्ने नै असजिलो हुने थियो त्यसैले भवन बनाउने कृुरालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर भवन निर्माण ग¥यौं । काठमाडौंंका १६ वटा नगरपालिकामध्ये हामी सबैभन्दा पहिला आफ्नै भवन बनाएर स¥यौं । अझै थप्दैछौ, बनाउँदै छौ । मिनी सिंहदरबार बनाएर जनताले वाह भन्ने खालको भवन बनाउँछौं भनेका थियौं, त्यसमा पनि अलिकति ढिलासुस्ती भएको छ । तैपनि हामीले यसको ७० प्रतिशत काम सम्पन्न गरेका छौं । नगरपालिकाको कार्यालय जाँदा आहा हाम्रो नगरपालिकको भवन भन्ने होस्, जनताले त्यो फिल गरून् भनेर काम गर्दैछौं । यसबाहेक शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेका छौं ।
काम गर्न चुनौती के–के छन् नि ?
यहाँको सामाजिक एकता अलि कमजोर छ, समाज अलि विभक्त छ, नकरात्मक सोच राखेर विरोधका लागि विरोध गर्ने मानिसहरू समाजमा अलि बढी नै छन् । जनताको अपेक्षा धेरै, त्यसलाई पूरा गर्ने स्रोत साधनको कमी, नमिल्दो विधि, पद्धति, नमिल्दो मेकानिज्म दक्ष कर्मचारीको अभाव, भएका कर्मचारीको पनि काम गर्ने शैली पुरानै भएकोले जनताको माग सम्बोधन गर्न नसकिने अवस्था हुन्छ । त्यसबाहेक समयमा काम गर्नेले नगर्दिने, आफूले भनेबमोजिम काम नहुने, काम गर्न सामान नपाउने, कारणले हामीले लिएको लक्ष्यमा कुनै ७० प्रतिशत ६० प्रतिशत कुनै ५० प्रतिशत जतिमात्र सम्पन्न गर्न सकेका छौं । हामी कुनै पनि आयोजना वा काम सम्पन्न गर्न ५० प्रतिशतबाट तल नझर्ने सकेसम्म ७० प्रतिशतको म्यारिटमै पुग्ने गरी काम गर्ने योजनामा छांै, अहिले यो हाम्रो परीक्षाको घडी पनि हो । सेकेण्ड डिभिजन त हाम्रो छँदैछ, तर हामी फस्र्ट डिभिजन नै ल्याउने योजनामा छौं, त्यहीअनुसार काम गरिरहेका छौं ।
संघीय र प्रदेश सरकारले मात्रै दिएर त यो नगरपालिका सम्पन्न हुँदैन यहाँकै चाँहि स्रोत साधन के छ त ?
हाम्रो नगरपालिका संघीय राजधानी काठमाडौंभित्रको पर्यटकीय क्षेत्रको नगरपालिका हो । हामी सबै प्रकारको जनशक्ति भएको नगरपालिकामा पर्छौ । हाम्रो संघीय सरकारसँग पनि राम्रो सम्बन्ध छ, प्रदेश सरकारसँग पनि राम्रो सम्बन्ध छ । हामी दुवैबाट सहयोग लिन सक्छौ, त्यो क्षमता राख्छौ । हामीसँग दक्ष जनशक्तिको पनि खाँचो छैन, दुवै सरकार र सरकारका सहयोगी निकायसँगको हाम्रो सम्बन्ध र सम्पर्क पनि राम्रै छ, त्यसैले कतियि योजना ल्याएका पनि छौ । विधि र प्रक्रियाअनुसार माग्दाखेरी भोलिका दिनमा थुप्रै योजनाहरू ल्याउन सक्छौ । तर, कार्यान्वयनको पाटो हाम्रो कमजोर छ जसले गर्दा काममा केही समस्या हुन्छ । अहिले त झन् कोरोनाले कामै गर्न पाएका छैनौं । तर हामीलाई आय स्रोतको कुनै खाँचो छैन । हाम्रो नगरपालिका आफैँमा पर्यटकीय नगरपालिका पनि भएकोले हामीलाई आय आर्जन गर्न केही समस्या छैन । यसबाहेक हाम्रो आफ्नै आम्दानीको स्रोतचाहिँ घर नक्सापास, मालपोत दस्तुर, घरबहाल कर आदि नै हुन् । यसबाट उठेको रकम र नपुगमा संघीय सरकार र प्रदेश सरकारले दिएको सहयोगले हामीलाई जनताको हितमा काम गर्न पुगेको छ, हामीलाई समस्या छैन । एउटै समस्या भनेको योजना कार्यान्वयन र छनौटमा समस्या छ । त्यसलाई एउटा विधिमा हालेर त्यो समस्याको हल गर्नेतर्फ हामी लागिरहेका छौं । खान नपाएकालाई खुआउँछौ,पढ्न नपाए हामी पढाउँछौ, हामीलाई दिएको आधारभूत शिक्षालाई हामी ग्यारेण्टी गर्छौंं, मावि शिक्षालाई सुलभ बनाउने कोसिस गर्छौंं तर मावि शिक्षालाई हामी निःशुल्क गर्न सक्दैनौ । उहाँहरु र हामी मिलेर राम्रो गुणस्तरिय र प्राबिधिक शिक्षा दिने काम गर्छौं । संघीय र प्रदेश सरकारसँग राम्रो समन्वय गर्छौं र हाम्रा आम्दानीका स्रोतको थप पहिचान गर्दै, जनताप्रति जिम्मेवारहुँदै नगरपालिकालाई समृद्ध बनाउने काममा लाग्छौं । हाम्रो जिम्मेवारी पनि नगरवासी जनताको हित र समृद्धि नै हो, त्यसमा हामी तलवितल नगरी आय स्रोत बढाउँदै नगरलाई सम्पन्न बनाउने छौं ।
प्रदेश सरकारले त कृषिलाई निकै महत्व दिएको छ, तपाईंहरूले नि ?
हाम्रो दुरदृष्टिसहितको दीर्घकालीन योजनाचाहिँ पर्यटन नै हो र हामीले जनतालाई पनि यही भनेका हौं । ‘स्वच्छ, शान्त, समृद्ध पर्यटकीय नगर बूढानीलकण्ठ’ भन्ने नाराका साथ हामीले पर्यटकीय योजना पनि बनाएका थियौं । तर त्यो कार्यान्वयनमा ल्याउन पाएका छैनौ, जसले गर्दा अहिले नगरको आम्दानीमा १ प्रतिशत पनि पर्यटनबाट कन्टिब्युसन छैन तर हामी निकट भविष्यमा पर्यटन पूर्वाधार समृद्धिको मुख्य आधारका साथ अगाडि बढ्दैछौं । कृषि त स्वभाविकै रूपले हामी कृषिप्रधान देशका नागरिक तर हाम्रो नगरपालिकाचाहिँ कृषिप्रधान छैन । हामीचाहिँ कृषिप्रधानबाट विस्थापितहुँदै बस्ती विस्तार नगरपालिकातर्फ लागिरहेका छौं । हाम्रोमा त खेती गर्ने जग्गा जमिन नै छैन, बस्ती विस्तार भएर घर बनिने क्रम बढेको बढ्यै भएर सहरीप्रधानहुँदै गएका छांै । त्यसैले यो नगरपालिका कृषि उत्पादनमा चाहिँ छैन तर पनि हामी बेच्न नसके पनि तरकारीमा भने आफूलाई पुग्ने गरी अर्थात निर्वाहामुखी हुनेगरी तरकारीमा आत्मनिर्भर हुनुपर्छ, हाम्रा करेसाबारी र कौसीमा तरकारी लगाएर आत्मनिर्भर बन्नुपर्छ भनेर कौसी खेती कार्यक्रम नै ल्याएका छौं । हाम्रो बागमती प्रदेशमा धेरै क्षेत्र कृषि, तरकारी र पशुपालनमा राम्रो सम्भाव्यता भएको प्रदेश भएको हुनाले प्रदेश सरकारले कृषिलाई फोकस गरेर कार्यक्रम र बजेट ल्याएको छ । यसमा हामी पनि आफ्नो ठाउँबाट सकेको कन्टिब्युसन गर्ने छौं । यसबाहेक हाम्रो नगरपालिकामा पर्यटनको सम्भावना राम्रो भएकोले हामीचाहिँ बस्तीलाई व्यवस्थित गर्ने, सेवामूलक व्यवसायलाई अगाडि बढाउने, व्यक्तिगत उद्यमशीलतालाई प्राथमिकता दिने र रोजगारीको सिर्जना गर्ने योजनामा छौं । जस्ले गर्दा हामी पर्यटनलाई नै हामीले पहिलो प्राथमिकतामा राखेका छौं । अबको १० वर्षमा पर्यटन यहाँको मुख्य आम्दानीको स्रोत हुनुपर्छ भन्ने लक्ष्यको साथ हामी काममा लागेका छौं । यसवर्ष हामी निकै काम गर्ने योजनामा थियौं, त्यसैले हामीले बजेटको भोलुम पनि निकै ठूलो नै ल्याएका थियौं । तर, कोरोनाले सोचे जसरी काम गर्न दिएन जसले गर्दा हामी खुम्चिएका छौं । हामी यो वर्ष नभए पनि अर्को वर्ष विकास निर्माणमा गुणात्मक रूपमै फड्को मार्ने छौं ।
संघीय सरकार र प्रदेश सरकारसँग कत्तिको समन्वय छ ?
राम्रो समन्वय छ । संघीय सरकार र प्रदेशसँग हाम्रो गुनासो छैन । हामीले एउटै गुनासो गरेका छौं । तपाईंहरूले ठूलाठूला योजनामा मात्र हात हाल्नुस्, स्थानीयस्तरका योजनामा हात हाल्नै पर्ने भए पनि हामीसँग समन्वय गरेर गर्नुस्, सानातिना काम हामी गर्छौं भनेको छौं । उहाँहरूले पनि मान्नुभएको छ, हामीलाई सहयोग नै गर्नु भएको छ । कहिलेकाहीँ योजना छनौटमा समन्वय नहुने, हामीले गरेका काममा उहाँहरूलाई चित्त बुझाउन गाह्रो हुने, उहाँहरूले नै काम गरेको जनतालाई देखाउनु पर्ने, संघले आफँैले काम गरेको देखाउनु पर्ने र योजना छनौट र कार्यान्वयनमा कहिलेकाहीँ समस्या आउने गर्छ । नत्र अन्य कुरामा हामीबीच राम्रो समन्वय हुन्छ, भइरहेको छ । हाम्रो संघीय सरकार र प्रदेश सरकारसँग कुनै गुनासो छैन ।
तपाईं इच्छाशक्तिका साथ काम गर्न सक्ने मेयरमै पर्नुहुन्छ, काम पनि गरिरहनुभएको छ सफलता नै पाउनुभएको छ, थप सफलताका लागि जनतालाई केही भन्नुहुन्छ ?
मुलुक र मुलुकबाहिर रहनुभएका आमनेपालीहरूमा कोरोना महामारीमा सचेत रही संक्रमणमुक्त हुनको लागि आआफ्नो ठाउँबाट पहल र प्रयत्न गर्नको लागि आग्रह गर्दछु । हामी पनि यो महामारीमा सचेतताका साथ अगाडि बढिरहेका छांै, बढ्छौं, हाम्रा नगरवासीलाई बचाउने अभियानमा कुनै कसर बाँकी नराखी लाग्ने छौं । तपाईंहरूको पनि हामीलाई उत्तिकै साथ र सहयोग चाहिन्छ । हामीले कुनै नराम्रो काम ग¥यौं भने खबरदारी गर्नुहोस्, हाम्रो तर्फबाट कुनै आर्थिक अपचलन भएको भए खबरदारी गर्नुस्, हामीलाई प्रमाणसहितको सूचना दिनुस्, हामी आफ्नो ठाउँमा सतिसालजस्तै उभिएर जिम्मेवारीका साथ आफ्नो कत्र्तव्य पूरा गर्ने, नगरपालिकालाई बनाउने र जनतामा खुसी ल्याउन लाग्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्दछु । विकास निर्माणका काम हुन्छन् गरौला तर अहिलेको महामारीको अवस्थामा बाँच्नु र बचाउँनु नै सबैभन्दा ठूलो काम भएकाले सुरक्षा सतर्कता अपनाई आफू पनि बचौं र अरूलाई पनि बचाऔं भन्न चाहन्छु ।